Xoggo Cusub Oo Laga Helay Amiiradii La Xidhay Ee Sacuudiga – somalilandtoday.com
Xoggo Cusub Oo Laga Helay Amiiradii La Xidhay Ee Sacuudiga
(SLT-Riyadh)-Qaar ka tirsan warbaahinada reer Galbeedka ayaa daaha ka qaaday xog cusub oo laga helay Amiiradii ay xidhay boqortooyada Sacuudiga maalmo ka hor, inkastoo aan weli si rasmi ah loo ogaan sababa keenay xadhigooda.
Wargeyska Washington Post oo la hadlay qaar ka tirsan qoysaska ay kasoo jeedaan Amiirada la xidhay ayaa sheegtay in loo ogolaaday inay la xidhiidhaan qoysaskooda iyo ilmahooda. Waa markii ugu horreysay ee loo ogolaado inay xidhiidh la sameeyaan qoysaskooda tan iyo markii la xidhay Jimcadii lasoo dhaafay.
Wargeyska oo sidoo kale soo xiganaya qoysaskaas ayaa qoray in Amiirada la xidhay ay u sheegeen qoysaskooda inay ku xidhan yihiin guryo si gaar ah loo leeyahay, isla markaana ayna ku xidhneyn xabsiyada dadweynaha, taasi oo mar kale dadka soo xasuusineyso Amiiradii iyo Ganacsatadii la xidhay sannadkii 2017, kuwaas oo lagu xidhay Hotelka The Ritz-Carlton oo ku yaalla magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga.
Wargayska Washington Post oo soo xiganaya ilahaas qarsoon ayaa sheegay in Amiir Ahmed Bin Abdulaziz oo ah walaalka la dhashay boqor Salman Bin Abdulaziz iyo amiir kale oo ka tirsan maxaabista ugu caansan ee la xidhay ay qoysaskooda ka codsadeen in loo keeno dharka “Bisht” oo ah dharka caadada u ah inay xidhaan Amiirada Sacuudiga marka ay yeelanayaan kulamada, waxayna taasi muujineysaa suurtagalnimada inay kasoo hor muuqdaan shacabka inkastoo si qasab ah loo xidhaya.
Washington Post ayaa qoray in xidhitaanka ilaa Afar Amiir oo caan ah, iyo 16 kale ay muujineyso go’aanka Mohamed Bin Salman oo ah inuu ka takhaluso cid kasta oo uu uga baqayo kursigiisa, wuxuuna qaaday tallaabooyin muujinayo kaaligii talisnimo tan iyo markii uu xukunka kala wareegay aabbihii sannadkii 2017.
Wargeyska Wall Street Journal ayaa dhankiisa qoray in maamulka Sacuudiga ay sii daayeen dhawr Amiir oo ka tirsan kuwii lasoo xidhay kadib markii lagu sameeyey baadhitaan keenay in lagu waayo dhammaan waxyaabihii lagu tuhumayey.
Wargeyska ayaa dadka lasii daayey sheegay inay kamid yihiin wasiirkii Arrimaha Gudaha Abdulaziz Bin Saud Bin Nayif iyo aabihii Saud Bin Nayif.
Wakaaladda wararka ee Associated Press oo sii xiganeysa illo wareedyo Sacuudi ah ayaa sheegtay in Xadhiga Amiirada oo ay kamid yihiin Ahmed bin Abdulaziz oo la dhashay Boqorka, Dhaxal-sugihii hore Muhammad bin Nayef iyo Nawaf bin Nayef ay digniin culus u tahay dhammaan xubnaha kale ee ka tirsan qoyska Boqortooyada.